လစ်ဗျားသမ္မတဟောင်း ကဒတ်ဖီကို ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် မီစူရာတာအရပ်၌ ကုလားအုပ်ကုန်သည် မိုဟာမက်အဗ္ဗဒူလဆန် အဗူမီနီယာနှင့် အိုင်ရှာအဗူမီနီယာတို့မှ ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အထက်တန်းလွန် ပညာကို ဘင်ဂါဇီမြို့ရှိ လစ်ဗျားတက္ကသိုလ်၌ ဆည်းပူးခဲ့ပြီးနောက် ကဒတ်ဖီသည် အင်္ဂလန်တွင် ...
ဆရာတော်လောင်းလျာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေကြီး မြင်းမူမြို့နယ်၊ ကန်ဖျားရွာ ခမည်းတော် ဦးဝိုင်း၊ မယ်တော် ဒေါ်စိန်ဥတို့မှ ၁၂၈၅ ခုနှစ် တပေါင်းလဆန်း ၃ ရက်တွင် ဖွားမြင်သော သားရတနာဖြစ်သည်။
ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းသော အသံကို ပိုင်ဆိုင်သူ ဗြိတိန်တေးရေးဆရာ၊ ဂရမ်မီဆုရ အဆိုတော် အေမီဝိုင်းဟောက်စ်သည် လန်ဒန်မြို့ တွင်မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကိုယ်တိုင်သီချင်းရေးစပ်ကာ ဂျပ်ဇ်ကလပ်များတွင် ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် တေးထုတ်လုပ်ရေ ...
အမေရိကန်ရုပ်ရှင်လောက ဟောလိဝုဒ်၏ ဂန္ထဝင်မင်းသမီးကြီး အဲလစ်ဇ်ဘက်သ်ရို့စ်မွန်တေလာ ကို ၁၉၃၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ဒန်မြို့၊ ဟမ်းစတက်ဂါးဒင်း၌ ဖခင် ဖရန်စစ်လန်းတေလာနှင့် မိခင် ဆာရာဗွိုင်လာတို့ကမွေးဖွားသည်။ ဖခင်နှင့်မိခင်မှာ အ ...
ဘီယထွင့်ဘုရင်မကြီးသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ဘုရင်မတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမအား ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက်၊ ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဘုရင်မအဖြစ် ဘိသိပ်ခံခဲ့သည်။ သူမ၏ အမည်အပြည့်အစုံမှာ Beatrix Wilhelmina Armgard, Princess van Oranje- ...
ဝစ္စလဝါ ရှင်ဘော့စကာ မှာ ပိုလန်နိုင်ငံသူ စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကဗျာ၊ အက်ဆေး၊ ဘာသာပြန်ရေးသားသူအဖြစ် ထင်ရှားသူဖြစ်ပြီး စာပေဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုကို ရရှိထားသူဖြစ်သည်။ ဝစ္စလဝါ ရှင်ဘော့စကာကို ၁၉၂၃ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂ ရက်နေ့တွင် ပိုလန်နိုင်ငံ၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အ ...
ဝီလျံဂျော့ဂျ်ဟေးရန်စ် သည် ၁၉၄၆ ၌ လူသတ်မှု ၃ မှုအား ဝန်ခံခဲ့သည့် အမေရိကန် ရာဇဝတ်သား ကွင်းဆက်လူသတ်သမား ဖြစ်သည်။ မှုခင်းဖြစ်ရာနေရာများ၌ နှုတ်ခမ်းနီဖြင့် သတင်းစကားများ ရေးခြစ်ခဲ့သောကြောင့် Heirens ကို နှုတ်ခမ်းနီလူသတ်သမား ဟုလည်း ခေါ်သည်။ အကျဉ်းထောင်တ ...
ပြည်မြို့ ဝေပုလ္လဆရာတော်မှာ သက်တော် ၆၈ နှစ်၊ သိက္ခာတော် ၄၈ ဝါ ရှိပြီး ပြည်မြို့ မင်းကြီးတောင်ခြေရှိ ဝေပုလ္လာ ရာမ ကျောင်းတိုက်တွင် သတင်းသုံးကာ သာသနာပြုနေခဲ့ရာ မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ၊ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ ဘွဲ့တော်တို့ကို နိုင်ငံ တော်မှ ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ...
အရှင် ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ သည် မဟာဂန္ဓာရုံစာသင်တိုက်၏ တတိယမြောက် နာယကချုပ်ဖြစ်သည်။ ပရိယတ္တိပညာရေးအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းရေးဆွဲနိုင်ရန် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့တွင် ဝန်ဆောင်သံဃာအဖြစ် နှစ်ကာလရှည်ကြာစွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် အဂ္ ...
ပြင်သစ်နှင့် အမေရိကန်တို့ကို အောင်မြင်စွာ တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည့် ဗီယက်နမ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ငုရင် ဂီယက် သည် ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်၌ အသက် ၁၀၂ နှစ် အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် ဒိန်ဖန်ဖူး Dien Bien Phu ၌ ပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့များကို အောင်မြင်စွာ ...
ပေါလ်ဝီလျံ ဝေါ်ကာ သည် အမေရိကန်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်၊ လူမှုရေးလှုပ်ရှားသူများနှင့်ပရဟိတတွင် တက်ကြွသူတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် လူအများကြားတွင် Fast & Furious ရုပ်ရှင်ကားတွဲများ မှ ဘရိုင်ယန် အိုကော်နာ ဇာတ်ကောင် အဖြစ် လူသိများသည်။ ဝေါ်ကာသည် ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈ ...
မာဂရက်သက်ချာ သည် ​အောက်တာတိုဘာ၁၃ရက်၊၁၉၂၅ ဂရမ်သမ်၊ ယူ​ကေတွင်​မွေးဖွားခဲ့သည်။ အမည်ရင်းမှာမာဂရက်​ဟေဒါသက်ချာဖြစ်သည်။​ ဒေသတွင်း ကုန်သည်နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်သည်။ မိသားစုပိုင် ကုန်စုံဆိုင်တွင် ကူညီရင်း ​ကျောင်းတက်ခဲ့သည်။ ပညာထူးချွန်သည့်အတွက် ​အေ ...
မီခေးလ် ကလာစနီကော့ဗ် (ရုရှားဘာသာစကား: Михаи́л Кала́шников; နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက် ၁၉၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်သည်ရုရှားဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ တီထွင်သူ၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာ၊ စာရေးဆရာနှင့်လက်နက်ငယ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည် AK-47 ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်နှင့်၎င်း၏တိုးတက်မှုမ ...
အိမ်ဖြူတော်သတင်းသမားလောကတွင် အမျိုးသမီးသတင်းထောက်ဘဝဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် ရင်ဘောင်တန်းကာ ပထမဦးဆုံးသတင်းလိုက်ခဲ့သည့် ဟယ်လင် သောမတ်စ် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ သူမကွယ်လွန်ချိန်တွင် အသက် ၉၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှ ...
၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ တွင် မွေးဖွားသော ကားလ် ဟန်းစ် အယ်လ်ဘရက်ချ် သည် ဂျာမန် စွန့်ဦး စီးပွားတီထွင် သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ Aldi ခေါ် လျှော့ဈေးဖြင့်ရောင်းချသော စူပါမားကတ် ဆိုင်ခွဲများ ကို အစ်ကို ဖြစ်သူ သီရို နှင့်အတူ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကားလ် နှင့် သီရို ...
ဇော်ဝင်းလေး သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တစ်ဦးတည်းသော စစ်တုရင် Grandmaster ဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည် တံခွန်စိုက်ချန်ပီယံဆုကို ၁၉၉၀၊ ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆ နှင့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တို့တွင် လေးကြိမ် ရရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့စစ်တုရင်ချန်ပီယံ ကားပေါ့ ကိုသရေရအောင် ကစားနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၃ ...
ရော်ဘင်ဝီလျံစ်သည် ၁၉၅၁-ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အီလီနွိုင်းပြည်နယ်၊ ချီကာဂိုမြို့ တွင် မွေးဖွားသည်။ ဟောလိဝုဒ် ဝါရင့် ဟာသဇာတ်ဆောင် မင်းသားကြီး ရော်ဘင်ဝီလျံစ် သေဆုံးမှုသည် မိမိကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံခြင်းဟု အမေရိကန် ရဲတပ်ဖွဲ ...
ဂျွန် နက်ရှ် (ဂျူနီယာ)
ဂျွန်ဖို့စ်နက်ရှ် သည် အမေရိကန်လူမျိုး သင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဂိမ်းသီအိုရီ၊ ဒစ်ဖရန်ရှယ် ဂျီဩမေတြီနှင့် ပါရှယ် ဒစ်ဖရန်ရှယ် ညီမျှခြင်း လေ့လာခြင်းများအတွက် အထောက်အကူပြုသော အခြေခံအချက်များကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ နက်ရှ်၏ ကြိုးပမ်းမှုရလ ...
မန္တလေးမြို့နေ သခင်သိန်းဖေနှင့် ဒေါ်မြမြတို့မှ ၁၉၄၂ ခု၊ မတ်လ ၂၁ ရက်တွင် မွေးသည်။ မွေးချင်း ၃ ယောက်အနက် အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ငယ်မည်မှာ အပါ ဖြစ်သည်။ အငယ်များမှာ သောင်းဒန်နှင့် ဆွေဆွေ တို့ ဖြစ်သည်။ မိခင်၏ တိုင်းချစ် အထက်တန်းကျောင်းတွင် အခြေခံပညာ သင်သည ...
ဘီဘီကင်း သည် အမေရိကန်လူမျိုး ဘလူးဂီတာရှင်၊ တေးရေးနှင့် တေးဆို ဖြစ်သည်။ ရိုးလင်းစတုန်း မဂ္ဂဇင်းက ၂၀၀၃ ခုတွင် သမိုင်းတလျှောက် အကောင်းဆုံးဂီတာရှင် အဖြစ် ဖော်ပြသည်။
ရုဒန်နီဆင် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော ဗုဒ္ဓဘာသာတရားပြဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူမသည် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားအားထုတ်မှုနည်းလမ်းများကို အမျိုးသမီးများကို ဦးဆောင်ကာ သင်ကြားပြသမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူမ၏ တရားစင်တာဖြစ်သည့် Dhamma Dena Desert Vipassana Center သည ...
ဆရာတော်လောင်းလျာကို မွန် ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်၊ လက်တက် ကျေးရွာ၌ အဖ ဦးနိုင်ဖေ၊ အမိ ဒေါ်တရုတ်မတို့မှ ၁၂၈၃ ခုနှစ်၊ ပြာသို လပြည့်ကျော် ၁ဝ ရက် တနင်္လာနေ့တွင် ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။
ဘူးထရို့စ် ဘူးထရို့စ် ဂါလီ သည် အီဂျစ်လူမျိုး နိုင်ငံရေးသမားနှင့် သံတမန် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ ကြီးတွင် ဆဋ္ဌမမြောက် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချူပ် အဖြစ် ၁၉၉၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ ၁၉၉၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် အီဂျစ်နိုင်င ...
မိုဟာမက်အလီ သည် ၁၉၄၂−ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ လူးဝီးစ္စဗီးလမြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ သည်။ ဆင်းရဲသားကပ္ပလီ လူမည်းမောင်နှံဖြစ်သော ကတ်စီးယတ်စမာစီလတ်စကလေး နှင့် အိုဒက်ဆာ ကလေးတို့မှ ဖွားမြင်သည်။ အမည်ရင်းမှာ ကတ်စီးယတ်စမာစီလတ်စ ကလေး ဖြ ...
ကင်ဂျုံဟွန်း သည် ဂျုံဟွန်းဟု အမည်ဖြင့် ကောင်းစွာ သိကြပြီး၊ တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ရေဒီယို တင်ဆက်သူ နှင့် စာရေးဆရာ ဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယား ယောက်ျားလေးအဆိုအဖွဲ့ ရှင်းနီး၏ အဆိုရှင် ဖြစ်ပြီး S.M. အင်တာတိန်းမင့် ၏ ပရောဂျက် အုပ်စု S.M. ...
ဦးကျော်ခိုင် သည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ၏ နာယကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကာလတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်၏မြို့မိမြို့ဖအဖြစ် ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ခုနှစ် ပါတီစုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ...
ချားလ်စ်မိုင်းလ်မန်ဆန် သည် အမေရိကန် ရာဇဝတ်သား နှင့် ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၆၇ နှစ်လယ်တွင် မန်ဆန်မိသားစုဟု လူသိများလာသော ကယ်လီဖိုးနီယားအခြေစိုက် စိတ်တူကိုယ်တူအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၉ ဇူလိုင်နှင့် ဩဂုတ်၌ မန်ဆန်၏ နောက်လိုက်များက ကွင်း ...
ဦးစိုးတင့် သည် စိုးလျှပ်စစ်ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပြီး ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ရှိ ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုးဈေးသည်များ၊ အနှေးယာဉ်လုပ်သားများ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ဒေါ်မြသွင် သည် ထေရဝါဒတရားပြဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ကာ ဝိပဿနာတရားအားထုတ်သည့် စင်တာများစွာကို ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် တည်ထောင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်။ သူသည် ဝိပဿနာတရားနည်းပြဆရာကြီး ဦးဘခင်၏ တပည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် ဦးဘခင်၏ အနောက်နိုင်ငံများတွင် ဗုဒ္ဓတရားအားထုတ်နည်းကို သင်ကြ ...
ဆာရော်ဂျာ ဂျော့ချ် မိုး ကေဘီအီး သည် အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင်မင်းသား တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် ဗြိတိသျှ လျို့ဝှက်အေးဂျင့် ဂျိမ်းစ်ဘွန်း အဖြစ် ၁၉၇၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၅ ခုကြား ရုပ်ရှင် ၇ ခုတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၁၉၆၂ နှင့် ၁၉၆၉ ကြားတွင် ရုပ်သံဇာတ်လ ...
လီလီအန် ဘတ်တန်ကော့တ် သည် ပြင်သစ်အမျိုးသမီး အမွေဆက်ခံသူ၊ နာမည်ကြီးများ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ရေပန်းစားသူ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ ပရဟိတလုပ်ငန်း အလှူရှင် တဦး ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကျော် အလှကုန် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်သော LOréal ၏ ရှယ်ယာအများဆုံး ပ ...
ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဝါဆိုဆရာတော် အဖြစ် လူသိများသော အရှင် အဂ္ဃိယ သည် မြန်မာနိုင်ငံသား ရဟန်းတော်တစ်ပါးဖြစ်၍ စုဒ္ဒသမ ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သည်။
ဝဏ္ဏကျော်ထင်ဦးထွန်းတင် ကို ၁၉၂၃-ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ရက်တွင် အဖ ဦးဖိုးစိန်၊ အမိ ဒေါ်ညွန့်တို့မှ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ သံတွဲမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ ဦးထွန်းတင်သည် ၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၌ ပညာသင်ယူသည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဥပစာတန်းစာမေးပွဲ၌ မြန် ...
အော်လယ် ယန် သည် ကိုးကန့်စော်ဘွား Sao Edward Yang Kyein Tsai ၏နှမဖြစ်ပြီး ဘိန်းဘုရင်မတစ်ဦး အဖြစ်လူသိများထင်ရှားသူဖြစ်သည်။
ကျင်းယုံ သည် တရုတ်စာရေးဆရာ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အမည်ရင်းမှာ လူးဝစ်စ်ချာ ဖြစ်သည်။ GMB နှင့် OBE စသည့် ဘွဲ့အမည်များကို ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး ၁၉၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ ရက်တွင် မွေးဖွားသည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် စတင်သော ဟောင်ကောင်နေ့စဉ် သတင်းစာ မင်ပေါင်း ကို တည်ထောင် ...
မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် ဦးသုဇန သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မြိုင်ကြီးငူတွင် သီတင်းသုံးသော ကရင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်သည်။ ဆရာတော်သည် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များနှင့် သဘောထားကွဲပြားမှုကြောင့် ဒ ...
တင် ဘားဂလင်း သည် စင်တက်အမည် အဗစ္စီ ဖြင့် ကျော်ကြားသည့် ဆွီဒင်လူမျိုး ဂီတပညာရှင်၊ တေးနှောနှင့် တေးသံသွင်းသူ ဖြစ်သည်။ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် ဂီတဖိုရမ်များတွင် သီချင်းများတင်ရာမှ ခွေထုတ်ပေးရန် ကတိရလာသည်။ ၂၀၁၁ ခုထွက် အထပ်များ Levels သီချင်းနှင့် ပေါက် ...
ကျိကော်ပြောင်း Ji Guobiao သည် တရုတ်အင်ဂျင်နီယာနှင့် တရုတ်အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းကျောင်း၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဖြစ်သည်။ သူသည် တရုတ်ပြည်တွင် ဓာတုဖိုင်ဘာအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာ၏ စွန့်ဦးလမ်းဖောက်သူ ဖြစ်သည်။
ပြုံးရွှင်ရွှင်လူသတ်သမား နှင့် မိစ္ဆာ ဟု နာမည်ပြောင်ပေးခံရသော ကြောင်း ကျစ် ဟုန် မှာ တရုတ်ကွင်းဆက်လူသတ်သမားနှင့် မုဒိမ်းသမား တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၆ နှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း မွန်ဂိုးလီးယား အတွင်းပိုင်း Ulanqab နှင့် Hohhot တို့၌ အမျိုးသမီး ၆ ဦးအား မုဒိမ ...
အာဘဲ နာအိုယ Naoya Abe သည် ကလောင်နာမည် George Abe ဖြင့် ကျော်ကြားပြီး၊ ဂျပန်စာရေးဆရာနှင့် ယာကူဇာဟောင်း ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ပြင်ပတွင် ကျော်ကြားသည်မှာ အနုပညာရှင် မဆအုမိ ခကိဇကိနှင့် ပူးတွဲပြီး Rainbow: Nisha Rokubō no Shichinin မန်ငစီးရီးကို ရေးသားခဲ့သောကြ ...
ချွိုင် ဂျင်ရီ သည် သရုပ်ဆောင်အမည် ဆောလီ အဖြစ် လူသိများသော ကိုရီးယား တေးရေး တေးဆို သရုပ်ဆောင်နှင့် ကိုယ်ဟန်ပြမယ် ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်တွင် SBS ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတခုဖြစ်‌သော Ballad of Seodong ၌ Young Princess Seonhwa of Silla အဖြစ်ပါဝင်ကာ ကလေးသရုပ်ဆော ...
ပရမ် တင်ဆူလန်နိုဒါ ၁၉၈၀ မတ်လ ၃ ရက်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ဩဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့အထိထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောထိုင်းစစ်တပ်အရာရှိ၊ နိုင်ငံရေးသမားနှင့်နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးကွန်မြူနစ်သောင်းကျန်းမှုအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုအရှိန ...
ဖရန်စက်စကို မာရီယာ ကိုလွန်ဘူ သည် အီတလီလူမျိုး ကာယဗလမောင်၊ အလေးမအားကစားသမား၊ သရုပ်ဆောင်နှင့် စာရေးဆရာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ မူလက လက်ဝှေ့သမားတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုလွန်ဘူသည် မစ္စတာ အိုလမ်ပီရာပြိုင်ပွဲကို ၁၉၇၆ နှင့် ၁၉၈၁ ၌ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး၊ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် စတင်က ...
လီဖင် သည် တရုတ်ဘူမိပညာရှင်နှင့် ငလျင်အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်သည်။ သူသည် တရုတ်အင်ဂျင်နီယာအကယ်ဒမီကျောင်းမှ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဖြစ်သည်။
လျိုရွှိ သည် ငှက်ဖျားဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဆေးသစ်တမျိုး ဖြစ်သော အာတီဆူနိတ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် တရုတ် ဆေးဝါးဓာတုပညာရှင် ဖြစ်သည်။ အာတီဆူနိတ်ကို ရှာတွေ့ခြင်းကြောင့် အာတီမစ်စီနင်၏ ရေတွင် မပျော်ဝင်နိုင်သော ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။ အာတီဆူနိတ်ကို သွေးပြန် ...
ဝူမင်စိန်း သည် တရုတ် စက်အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်သည်။ ရှင်းဟွာတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်နှင့် ဖူကျိုးတက္ကသိုလ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ဂီတာဖေဝင်းသည် ဂန္ဓဝင်တေးသီချင်းရေးဆရာ၊ မြန်မာသံစဉ်တေး အဆိုတော်နှင့် ဂီတာမယ်ဒလင် တီးခတ်သူ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏သီချင်းများထဲမှ မျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိပ်ကြည့်ပါ သီချင်းသည် မြန်မာသံစဉ်တေးများတွင် နာမည်ကျော်ကြားသော တေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
ငယ်စဉ်အခါက ကလေးသရုပ်ဆောင် တာတူးအဖြစ် ကျော်ကြားသည်။ တာတူးလေးအမည်ဖြင့် အနုပညာလောကသို့ ဝင်ရောက်လာသည်။ စာရေးဆရာ ဦးသုခ၏ ဘဝသံသရာ သီချင်းကို သီဆိုဖြစ်ရာမှ အသက် ၂၃ နှစ်တွင် မတော်တဆ အဆိုတော် စဖြစ်လာသည်။မြန်မာအသံက ထုတ်လွှင့်သော ဆိုကြမယ်၊ ပျော်ကြမယ် အစီအစဉ် ...
ဆာ တောမတ်စ် ရှောင်ကွန်နရီ သည် စကော့လူမျိုး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်နှင့် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အကယ်ဒမီဆု တစ်ခု၊ ဘက်ဖ်တာဆု နှစ်ခု နှင့် ရွှေကမ္ဘာလုံးဆု ၃ ခု ကို ရရှိခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်သည်။
ဇင်မာဦး သည် မြန်မာနိုင်ငံသား သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီဆုရ မင်းသမီး တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ခင်ပွန်းမှာ သီဟတင်စိုး ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် သီတာခုနစ်တန် ဆေးရောင်ခြယ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြင့် အကယ်ဒမီဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
ကျိုက်ထီးရိုး တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမ ..
ပန်းလောင်နှင့် ပြဒါးလင်းဂူ တောရိုင်းတ ..
မင်းစုံတောင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ ..
မိန်းမလှကျွန်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေး ..
မော့စ်ကော့ကျွန်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘ ..